Swansea City Oo Xaqiijisay In Brendan Rodgers Uu Tababare U Noqon Doono Liverpool.
Swansea ayaa xaqiijisay in tababare Brendan Rodgers uu u sheegay kooxda inuu doonayo inuu ka tago si uu u noqdo tababaraha cusub ee Liverpool.
Wadahadalo ku aadan arintaas ayaa dhacay shalayto, iyadoo Rodgers uu weydiistay kooxda inuu ka tago si uu u noqdo ninkii bedeli lahaa Kenny Dalglish, waxaana labada kooxood ay haatan kawada hadlayaan lacagta magdhowga ee ay qaadan doonto Swansea.
Gudoomiyaha kooxda Swansea City ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku yiri: “Waxaa ila soo xiriirtay Liverpool, waxaana ii sheegeen inay doonayaan inay la hadlaan Brendan”.
“Anigana waxaan wadahadal la yeeshay Brendan oo ku aadan hadii uu doonayo inuu la hadlo Liverpool”.
“Waxa uu ii sheegay inuu doonayo, waxaana uu wadahadal la bilaabay Liverpool”
“Ka dib wadahadalkoodaas Brendan waxa uu nagu wargeliyay inuu jeclaan lahaa inuu qabto hogaanka Liverpool oo uu aqbalo dalabkooda”.
“Xilli la joogo waxaan wadahadal kula jirnaa milkiilayaasha Liverpool oo ku aadan magdhowga aan ka qaadan laheyn iyaga”.
“Waxaan rajeyneynaa in heshiiska la soo gabagabeeyo 24ka saacadood ee soo socda”.
Rodgers ayaa lagu soo waramayaa inuu ogolaaday heshiis seddex sanno ah oo uu Reds kula joogo, halka sidoo kale la filayo in agaasimaha Isboortiga ee kooxda loo magacaabo Louis van Gaal.
Iker Casillas Oo Jabiyay Rikoorka Ciyaaryahanka Ugu Guulaha Badan Ciyaaraha Caalamiga.
Goolhayaha Kooxda Real Madrid Iker Casillas ayaa dhigay rikoor cusub oo dhanka guulaha caalamiga ah ka dib markii ay xulkiisa Spain ay 4-1 kaga talaabsadeen xulka South Korea ciyaar saxiibtinimo.
Iker Casillas ayaa saftay kulankiisii 130aad ee Spain, Casillas ayaa guul la qeybsaday Spain 95 kulan, isagoo noqday ninka ugu sareeya guulaha caalamiga ah marka loo fiirsho Difaacii France Lilian Thuram iyo xidigii Masar Ahmed Hassan.
31 jirkaani ayaa bedel kusoo galay qeybtii labaad ee ciyaarta halka uu goob joog u ahaa goolka afaraad ee uu shabaqa dhex dhigay Alvaro Negredo.
Casillas, oo sidoo kale 74 kulan aan shabaqiisa laga soo taaban intii uu xulka u ciyaarayay ayaa noqday goolhayihii afaraad ee ugu safashada badan ciyaaraha caalamiga, waxaana uu ka danbeeyaa goolhayaha Saudi Arabia Mohamed Al-Deayea oo saftay 178 kulan, goolhayihii Italy Thomas Ravelli oo saftay 143 kulan iyo goolhayihii South Korea Lee Won-Jae oo saftay 132 kulan.
Ciyaaro Saaxiibtinimo: Xulalka Spain Iyo Netherlands Oo Guulo Gaaray.
Xulka Spain ayaa kulan saaxiibtinimo la ciyaaray xulka South Korea ciyaar ka dhacday Stadium De Suisse Wankdorf Bern — Bern, xulka Spain ayaa kubada inteeda badan iska heystay iyadoo oo goolka hore u furay daqiiqadii 11aad ee ciyaarta Torres oo kubad uu ka helay Juan Mata madax ku dhaliyey,laakiinse daqiiqadii 43aad ee dhamaadki qeybtii hore ee ciyaarta South Korea waxaa goolka barbaraha u dhaliyey ciyaaryahankooda Do-Heon Kim oo banaaka diilinta 18aad ka toogtay goolka uu wardiyaha ka ahaa Reina, sidaas ayaana lagu kala nastay.
Daqiiqadii 52aad ayaa kubad uu so laaday Nacho Monreal waxaa gacanta ku taabtay ciyaaryahan Yong-Hyung Cho, waxaana garsoorihii ciyaarta Bieri‎ uu Spain u dhigay gool ku laad waxaana shabaqa ku hubsaday Xavi Alonso.
Afar daqiiqo ka dib Santiago Cazorla González ayaa laad xor ah oo jog hoose ku socda goolka sedaxaad ugu saxiisay Spain.
Goolka hurdada u diray South Korea ayaa waxaa shabaqa ku hubsaday Negredo oo bedel kusoo galay ciyaarta.
Dhanka kale xulka Netherlands ayaa caawa la ciyaaray xulka Slovakia iyagoo ku dardaray laba iyo waxba.
Goolka koowad ee Holand ayaa yimid daqiiqadii 11aad ee ciyaarta ka dib markii kubad uu soo karoosay Ibrahim Afellay uu shabaqiisa ku leexshay Kornel Salata 1-0 kaasi ayaana lagu kala nastay.
Goolka labaad ee Netherlands ayaa yimid ka hor 15 daqiiqo dhamaadkii ciyaarta ka dib markii uu kubab meel shabaqa u dhow ka helay Rafael van der Vaart isagoo xagasha midig ka dhigay goolhaye Jan Mucha ayaana awoodi waayey inuu qabto.
Sweden iyo Iceland ayaa waxaa dhex maray ciyaar xiiso badan oo shan gool ay iska dhaliyeen labada xul, Zlatan Ibrahimovic ayaa goolka koowaad u furay xulka Sweden daqiiqadii 2aad ee ciyaarta ka dib markii uu loob fiican ka helay Sebastian Larsson wuxuuna halkas ka dhilyey gool aad u qurux badan, Ola Toivonen ayaa Sweden u dhaliyey goolka labaad ka dib markii Zlatan Ibrahimovic uu soo sarqaamiyey difaaca midig ee xulka Iceland Aron Einar Gunnarsson isagoo kubada soo dhex dhigay meel ay isku xoomsanaayeen ciyartoy badan waxaase lugta la helay Ola Toivonen oo gool u sarifay.
Iceland ayuu gool usoo celiyey ciyaaryahankooda Kolbeinn Sigthórsson daqiiqadii 29aad ee ciyaarta,waxaase hurdo u diray Christian Wilhelmsson oo bedel kusoo galay iyadoo ay ciyaarta ka dhiman tahay 10 daqiiqo,goolka labaad ee Iceland ayaa dhashay ciyaarta oo sii idlaaneysa waxaana u dhaliyey difaacooda Hallgrímur Jónasson.
Switzerland iyo Romania ayaa iyaguna ciyaaray iyadoo xulka Switzerland ay ciyaartii tan ka horeysay kusoo tumatay xulka Jarmalka caawa ayaase la dhadhhensiiyey guuldaro,waxaana hal iyo waxba ugu awood sheegtay Romania,
Goolka guusha siiyey waxaa u dhaliyey Grozav daqiiqadii 57aad ee ciyaarta.
“Igu Soo Tuur Moos, Waana Ku Dili Doonaa” Ayuu Ku Hanjabay Balotelli Ka Hor Euro 2012.
Balotelli ayaa ku hanjabay inuu isaga bixi doono garoonka hadii cunsurinimo
lagula kaco ciyaaraha Euro 2012, isagoo sheegay inuu dili doono qof walba oo
isku dayaa inuu moos ku soo tuuro isaga.
kooxda Manchester City ayaa ka hadlay walaaca sii kordhaya ee ku aadan in la
bartilmaameedsan doono ciyaartoyda midabka madow marka uu koobka Euro 2012
isbuuca soo socda ka bilowdo Poland iyo Ukraine.
Alex Oxlade-Chamberlain iyo Theo Walcott ayaan u safrin doonin Ukraine madaama
ay u baqeen amaankooda, lakiin Balotelli oo asal ahaan ka soo jeeda Ghana ayaa
yiri: “Marnaba ma aqbali doono midabtakoor. Waa wax aan la aqbali karin. Hadii
qof uu igu soo tuuro moos anigoo wadada maraya, waxaan aadi doonaa xabsi
sababtoo ah waan dili doonaa”
ayaa dhowr jeer dhibane u ahaa cunsuriyada, waxaana ugu danbeysay bishii
Febraayo markaasoo FC Porto lagu ganaaxay in taageerayaashooda ay isir naceb
kula kaceen Mario kulankii Europa League.
aragno waxa ka dhaca Euro” ayuu hadalkiisa raaciyay Balotelli.
rajeynayaa in dhibaato la;aan uu ku dhamaado. Sababtoo ah uma dulqaadan karo
waxyaabahaas oo kale”.
ayaa intii uu Inter Milan u ciyaarayay waxaa cunsurinimo kula dhaqmay
taageerayaasha kooxaha Juventus iyo Roma, taasoo kaliftay in Juve mar lagu
ganaaxo inay ku ciyaarto garoon bilaa taageero ah.
June sannadkii hore, waxaa baar ku yaala caasimada Talyaaniga ee Rome kula kacay
cunsurinimo isagoo lagu soo tuuray moos sida inuu yahay daanyeer.
dhacdadaas ka hadlayana waxa yiri: “Nasiib ayay aheyd inuu boliiska halkaas
yimid, sababtoo ah waan garaaci lahaa. Xaqiiqdii waa burburin lahaa. Waxaan
rajeynayaa inaysan dib danbe u dhicin”.
Pep Guardiola Oo Dalbaday Inuu Si Fool Ka Fool Ah U La Kulmo Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich.
Guardiola ayaa doonaya inuu kulan fool ka fool ah la yeesho milkiilaha Chelsea
Roman Abramovich ka hor inta uusan go’aansan inuu noqdo tababaraha kooxda
Chelsea ama hadii kale. Sida ay qortay The Sun.
heysata Champions League ayaa ceyrsaneysa tababarihii hore ee Barcelona iyagoo
doonaya inay u soo bandhigaan heshiis 11 milyan ginni ah sannadkii.
Sida The Sun ay qortay waxaa sidoo kale loo balanqaaday inaan wax cadaadis ah lagu saari doonin inuu koob weyn u qaado kooxda labada sanno ee ugu horeysa shaqadiisa, inta uu kooxda qaabkeeda isku duwayo.
Guardiola ayaan weli laga dhaadhicinin dalabkaas, inkastoo uu kulan la qaatay
isniintii saraakiil ka socota Blues.
uu dalbaday inuu si shaqsi ah u la hadlo Abramovich, si uu dalabkaas uga maqlo
milkiilaha laf ahaantiisa sida ay qoreyso The Sun.
ayaa la sheegayaa inuu diyaar u yahay inuu la kulmo Guardiola, kaasoo doonaya
inuu sannad ka nasto kubada cagta.
ay taasi keeneysaa in mustaqbalka Roberti di Matteo uu shaki galo.
waxaa lagu soo waramayaa in Di Matteo uusan xiiseyneynin inuu kooxda sii hayo 12
bilood kale inta uu Guardiola ku maqan yahay nasashada mudada sannadka ah.
Mario Balotelli: Casho Ayaan Ku Iibin Doonaa, Hadii Aad Soo Hesho Qof Aniga Oo Kale Ah.
Italy Mario Balotelli ayaa ku dooday inay adag tahay inay dadku ay fahmaan isaga
sababtoo ah waxaa jira dad tiro yar oo leh tayadiisa oo kale sida uu hadalka u
uu leeyahay awood uu kaga dhex muuqdo garoonka, 21 jirkaan ayaase bartamaha kaga
jiray fadeexado shaqsiyadeed oo kala duwan.
weeraryahanka Manchester City ayaa soo jeediyay in dhibka uusan isaga ka imaan
balse uu ka yimaado dadka aan dareesaneyn tayadiisa.
dadka waan ka duwanahay. Hadii aad soo hesho nin anigoo kale ah, waxaan ku iibin
doonaa casho” ayuu Balotelli u sheegay France Football.
waxa weeye inay jiraan dad tiro yar oo leh tayadaan oo garsoori kara waxa aan
sameeyo. Hibada uu Ilaahey i siiyay waa mid qurux badan oo weyn, lakiin waa adag
tahay inaad maamusho hibadaas sababtoo ah waxaa mar walba kaa horimaanaya dad
diyaar u ah inay ku garsooraan”.
ahan wax sahlan, lakiin mana ahan riwaayad. Dadka aan i fahmi karin ima xiiso
ayaa qeyb ka ah xulka tababare Cesare Prandelli ee ka qeybgalaya Euro
Kabtanka Lazio Mauri Oo Xabsi La Dhigay, Criscito Iyo Antonio Conte Oo Baaritaan Uu Ku Socdo.
diyaarinta xulka Italy ee koobka Euro 2012 ayaa waxaa hareeyay wararka ku
saabsan xubno caan ka ah kubada Talyaaniga oo baaritaan uu ku socdo halka qaar
kalena la xiray iyadoo looga shaki qabo inay lug ku leeyihiin fadeexada ku aadan
qamaarka sharci darada ah ee ay ku sameeyeen kulamada qaar.
Talyaaniga ayaa xiray kabtanka kooxda Lazio Stafano Mauri, kaasoo sidoo kale 11
kulan u saftay xulka Talyaaniga, isagoo lagu eedeeyay inuu ka qeyb qaatay
ciyaaraha natiijoyiinkooda la sii qorsheeyay si qamaar loogu guuleysto, halka
ciyaaryahanka khadka dhexe ee Genoa Omar Milanetto uu isna qeyb ka ahaa 19 kale
oo la xiray sida boliiska ay sheegeen.
la xiray maanta ayaa ah dad looga shaki qabo inay ka qeyb qaateen koox si sharci
darro ah qamaar ku dhigata ciyaaraha oo uu hogaaminayay nin u dhashay Singapore
Tan Seet Eng kaasoo la xiray dhamaadkii 2011.
Zenit St. Petersburg Domenico Criscito ayaa isna baaritaan uu ku socdaa, waxaana
ay boliiska ay ku booqdeen xarunta tababarka ee xulka Talyaaniga saaka ee
intaas sii dheer in sidoo kale tababaraha Juventus Antonio Conte isna farta lagu
fiiqay, waxaana boliiska ay baaritaan ku sameeyeen gurigiisa si ay u ogaadaan
inay ku lug lahaa ciyaarahaas natiijooyinkooda la qorsheeyay si qamaar loogu
maanta ayaa qeyb ka ahaa baaritaan balaaran oo ku aadan ciyaaro natiijooyinkooda
la qorsheeyay oo ka dhacay Talyaaniga.
hore ee Italy Cristiano Doni iyo Giuseppe Signori ayaa laga mamnuucay inay ka
qeyb qaataan kubada cagta, madaama lagu helay fadeexad la mid ah tan haatan
baaritaanka lagu hayo.
Sergio Aguero Oo Iska Fogeeyay Warar Ku Saabsan Inuu Ku Biirayo Real Madrid.
Manchester City Sergio Aguero ayaa biyo qaboow ku shubay wararka sheegaya inuu
ka tagayo xagaaga kooxda Sky Blue islamarkaana ku biirayo kooxda Real
jirkaan ayaa xilli ciyaareedkii ugu horeysay ee City ku raaxeystay isagoo u
dhaliyay 23 gool oo horyaalka ah oo uu ku jiro goolkii guusha ee uu ka dhaliyay
QPR kaasoo gacanta u geliyay City horyaalka Premier League.
reer Argentina ayaa lala xiriirinayay inuu ku laabanayo Spain gaar ahaan Real
Madrid, lakiin waxa uu beeniyay haatan wararkaas xanta ah isagoo sheegay inuu ku
faraxsan yahay nolosha Manchester.
waxa uu yaalaa Manchester City” ayuu u sheegay wargeyska The Times.
doonayaa inaan halkaan joogo. Qandaraaskeyga waa muddo afar sanno ah halkaan
inaan ku dhameysto ayaana doonayaa”.
walba waxaa jiraya warar xan ah, lakiin wax ka run ah ma jiraan. Kuma fekerayo
inaan u dhaqaaqo Real Madrid ama kooxda kale”.
waxa ay iila dhaqantay si wanaagsantan iyo maalintii ugu horeysay ee aan
imid. Waxaan saldhigtay kooxda, qoyskeygana waa ay ku faraxsan yihiin
Manchester, waxaan doonayaa inaan joogo”.
walba halkaan ayaa kula guuleysan karaa. Haatan waxaan ku guuleysanay hal
horyaal, waxaana dooneynaa inaan koobab badan ku guuleysano”
Madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe Oo Sheegay Inuu Taageero U Yahay Chelsea Iyo Barcelona.
Zimbabwe Robert Mugabe oo muddo 32 sanno ka talinayay dalkiisa ayaa shaaca ka
qaaday inuu taageero u yahay kooxaha Chelsea iyo Barcelona, ka dib markii uu
daawaday ciyaar lagu macsalaameynayay kabtankii hore ee xulka qaranka Zimbabwe
Benjani Mwaruwari. 88
jirkaan ayaa u sheegay weeraryahanka Portsmouth: “Wax badan ayaan kula socday,
ciyaaro badan ayaana kaa daawaday, laakiin waxaan ahay taageere Chelsea iyo
Barcelona, waxaana mar walba doonayaa inay goolal dhaliyaan” ayuu yiri sida ay
aan daawanayo kubada cagta, ma doonayo inay qofna iga qasto. Xitaa xaaskeyga
waxa ay ogtahay halka ay fariisaneyso sababtoo ah marka ay iyaga goolasha
dhalinayaan, anigana goolal ayaan ku dhaliyaa gurigeyga, waxaan laadaa wax walba
oo horteyda yaala”.
Mugabe ayaa ku soo aaday xilli Chelsea ay ku guuleysatay Champions League
islamarkaana Barcelona ay qaaday koobka Copa del Rey.